शरीरको तौल घटाउन मनछ भने कपडा नलगाइकन सुत्नुहोस , कपडा नलगाइकन सुत्दा यति धेरै फाइदैफाइदा – Sandesh Press
July 29, 2021 300
मानव जीवनमा सुताई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कसरी सु’तिन्छ भन्ने कुराले पनि मानव जीवन कति सुखी छ भन्ने थाहा हुन्छ। सामान्यतया मानिसहरू आफ्नो सु’ताइबारे धेरै सोच्दैनन् ।
तर, ‘बेड–ला’इफ’ ले पनि कतिपय अवस्थामा सिङ्गो जीवनशैलीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको पश्चिमा केही वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । केही वैज्ञानिक र मनोविज्ञहरुका अनुसार शरिरमा कुनैपनि लुगा न’लगाइनकन सुत्नुका मुख्य फाइदाहरू यस्ता छन् :
१. हा’इजेनिक हुन्छ :राती सुत्ने बेला पेन्ट वा अरू कपडा लगाएर सुत्दा शरीरमा विभिन्न ब्या’क्टेरिया प्रवेश गर्न सक्छ । त्यसैले पनि कुनैपनि लुगा न’लगाइनकन सुत्नु हा’इजेनिक मानिन्छ । जसले गर्दा शरीरमा राति गर्मी हुनसक्ने भएकाले पनि वैज्ञानिकहरू त्यसरी सुत्नुलाई हा’इजेनिक मान्छन् ।
२. राती सहज रूपमा सुत्न सकिन्छ :तपाईँ सुत्ने बेलामा शरीरको तापक्रम पनि कम हुनु आवश्यक हुन्छ । हामी ग’हिरो निन्द्रामा हुँदा शरीरको तापक्रम पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुनुपर्छ । तर, कपडासहित सुत्दा शरीरमा तापक्रम बढ्न सक्छ । यसरी, शरीरको तापक्रम सन्तुलन बनाउनका लागि पनि कुनैपनि लुगा नल’गाइनकन सुत्नु आवश्यक छ ।
३. से’क्स डि’जा’यर बढाउँछ :छाला छो’एर सुत्दा स्वाभाविक रूपमा शरीरमा ह’र्मोनको मात्रा बढ्छ । जस्तै, अ’क्रिटो’किन जस्तो हार्मोनको मात्रा बढ्छ । र यसले शरीरमा से’क्स’को डि’जा’य’र पनि बढाउँछ । यसरी, एक्लै वा जोडी सु’त्दा पनि छाला छो’इँदा त्यसले शा’रीरिक आवश्यकता पनि बढाउँछ ।
४. अ’द्धित्तिय स्व’तन्त्रता मिल्छ :कुनैपनि लुगा न’लगाइनकन सु’त्दा साँच्चिकै स्व’तन्त्रता मिल्छ । यत्तिको स्व’तन्त्रताको अनुभूति सायदै अरू ग’तिविधिबाट मिल्ला । यसले सं’वेदनशीलता पनि अन्य अवस्थामा भन्दा ब’ढी हुन्छ ।
५. शरीरको तौल घ’टाउन मद्दत गर्छ :मो’टो हुने मानिसहरू शरीरको तौल घटाउन धेरै को’सिस गर्छन् । तर, कुनैपनि लुगा नलगाइनकन सु’त्नाले पनि शरीरको तौल घट्छ । शरीरको तौल घटाउने यो पनि एउटा राम्रो तरिका हो ।
Prevके थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय खुल्ला होला ? यस्तो भयो सीसीएमसीमा छलफल
Nextश्रीमानसँग मनका कुरा गर्न आवश्यक छ, यहाँबाट सुरु गर्न पर्छ तर यी कुरा ध्यान राखेर
प्रयांकस्टार एलिस राई कसरी यस्तो हालतमा पुगे ?( भिडियो सहित)
भरतपुरमा पुनः रेनु र विजयको बराबर मत, जगन्नाथ धेरै पछि